Eyokuqala ngesandla isibhamu yasungulwa Tomas de Vilbiss e ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. Kusukela ngaleso sikhathi, uye washintsha eziningi ngenxa lezi zinto ezilandelayo: nekusebenta, sishaye, ageleze uhlobo, indlela azakhele emoyeni ithoshi umbono Umdwebo impahla.
It kuyafaneleka ukucabangela isibhamu ngesandla nge izinhlelo ezahlukene spray womoya for yokulungisa izinjongo. Nakuba izibhamu ngaphandle nibonakala kubantu nilungile amasistimu ezahlukene zifana, bayehluka ekuklanyweni iziteshi emoyeni, kanye nokwakheka ikhanda. Lokhu kuyaqondakala, ngoba akukho sizathu ukushintsha athuthukile kanye umzimba isibhamu, design esihle futhi Ergonomics.
Manual spray isibhamu ungasebenzisa eyodwa yezindlela eziningana ukulethwa upende. Lapho ophoqelelwe ukusuthisa futha ingcindezi inyuka ezikhathini eziningana, ngemva kwalokho ketshezi ihlinzekwa kuya nebulizer. Le ndlela kufanelekile lezo zindawo lapho edingekayo yokwenza endaweni enkulu umbala ngombala owodwa isikhathi eside. Gun isinyathelo manual ithangi elingaphansi Kunconywa ukuba asebenzise ngenxa yokudweba izingxenye ezinkulu, ezifana eziseceleni ezimotweni noma umzimba eyohlobo ngokuphelele enamels self-ezinemibala.
emagalaji Modern kanye nomthengisi umzimba ukulungisa esiteshini ukwakha umsebenzi Paint nomzimba ingxenye ukuze ngokushesha ukuthuthukisa semali yesondlo ezincane nsuku zonke. Imoto ukwamukelwa ekuthunyelweni ekuphokopheleni ngokuhambisana scheme ezilandelayo: Valve, ithini upende ingxenye yokugcizelela futhi ukuze ulondoloze isikhathi Lesisemkhatsini sokulungisa amathangi. Lezi izimo zivumele esiphezulu ukulayisha ikhamera oluxube esikhiphekayo, zipendwe ngemibala ehlukile ngenxa yesizathu esisodwa umjikelezo wokusebenza.
Manual spray isibhamu has idivayisi elandelayo futhi isimiso ukusebenza. Umklamo ithuluzi silula: lisetshenziswe umzimba cylindrical okuyinto iyisonto futha plunger, okuyinto actuated ngokucindezela isibambo futhi ixhunywe izindlu hoses ezimbili. Omunye isetshenziselwa abancela impahla aphume ebhakedeni noma ezinye esitsheni, futhi ekupheleni lesibili fixed zifakwa isibhamu ngoba sishaye Ukwakheka phezu kwaleyo.
Ukuze usebenze imanuwali spray isibhamu KRDP udinga ukudala ingcindezi ngokusebenzisa uchungechunge ompompi on isibambo. Valve is ukuvulwa oqeda isibambo, isitsha yangaphandle Yenziwe isakhiwo engayitholi echibini kudivayisi, bese hose ukuncela kufanele ukuyikhipha the isitsha upende, bese ekhiphela emoyeni ku iyunithi. Lapho ligcwele, ukwakheka kungenziwa olufuthwe, ephumela ibhola valve isibambo, esemgwaqweni kwayo kuleyo ndawo yokuhweba. Yena ikuvumela ukulungisa ukusetshenziswa inki namandla wokufaka yayo.
Ngokuvamile, isibhamu spray ifakwe amathuluzi, ukwakha induku ende-Butt elivumela omi umhlabathi ukuba uphinde uthele Umdwebo izindonga kanye nezinye izakhiwo, okuphakama kwawo isesikhathini amamitha amane. Amasondo ungase unikezwe ekuklanyweni kudivayisi kalula ukuhamba kwayo esakhiweni.
IStabilizer Ukushisa kubhayela: Ukukhetha, incazelo, izici
20 izinto engavamile ukuthi ungakwazi ukuhlanza ku Umshini wokuwasha izitsha
Amanzi heater ngemibuzo. Kuyini lokhu?
Kuban University of Technology: incazelo, ikhethelo, isikolo eyayidlula Izibuyekezo
Indlela ukuhlola ezikhangayo Phuket sika bebodwa?
Abesifazane Aries futhi Scorpio wesilisa - Oluvumelana